DAAWO: Sidii uu u Dhacay Weererkii Xildhibaan Maxamed Cali Diheeye (VIDEO)
April 05, 2016 – Waxaa saaka Gaari uu saarnaa Xildhibaan Maxamed Cali Diheeye ay abaarihii 4-saac subaxnimo ay qolyo hubaysan ku weerareen agagaarka Suuqa Bacadlaha ee Dagmadda X/weyne, waxaana weerarkaasi ka dhashay Khasaaro isugu jira Dhimasho iyo Dhawaac.
Xildhibaanka ayaa Gaariga uu saarnaa waxaa ku geeriyooday Darawalkii Gaariga iyo mid kamid ah ilaaladiisa waxaana dhaawac uu soo gaaray Xildhibaan Diheeye iyo mid kaloo ilaaladisa kamid ahaa.
Gaariga lagu waday Xildhibanka waxa uu ahaa Kaarib, waxana isla markiiba goobta looga qaaday gaari kale, waxaana la sheegayaa in dhawaca soo gaaray xildhibaanka la sheegay in uu yahay mid fudud.
Dad ka gaabsaday in muuqaalkooda la adeegsado ayaa sidoo kale sheegay in gaarigii werarka lagu fuliyay uu isla markiiba goobta isaga cararay.
Saacad ka dib marka falkaasi uu dhacay ayaa waxaa goobta soo gaaray, Afahayenka Maamulka Gobalka Banaadir C/fataax Cumar Xalane mar la waydiiyay Dilalka ku soo kordhay maalmahan Magalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay yihiin wax horay Magalada uga dhici jiray isagoo ku goodiyay Marka si rasmi ah maamulka Gobalka loogu warejiyo Sugida amniga Muqdisho in la arki doono wax qabadkooda.
Xildhibaan Maxamed Cali Daheeye Goobta lagu weraray waxaa 3 bishan lagu dilay Marxuum Mahad Faarax Muxidiin oo ka mid ahaa saraakiisha Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka.
Xildhibaan Maxamed Cali Daheeye Waxaa loo dhaariyay Xildhibaanimada Baarlamanka Soomaaliya 27-kii Apriil sanadkii tagay ee 2015 waxana uu badalay booskii Alaha u naxariistee Xildhibaan C/llaahi Qayaad Barre oo ay kooxo Hubeesan ku dileen Bishii 2aad ee sanadkii 2015 Dagmada Xamar jajab ee magaalada Muqdisho.
May 24, 2016 tuugahaladilo2015